को हुुन् बार्सिलोनाका नयाँ प्रशिक्षक क्विक सेटिन ?
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलको हुुन् बार्सिलोनाका नयाँ प्रशिक्षक क्विक सेटिन ?
विराटनगर, १ माघ । समुद्र किनारमा खेल्दै आफ्नो फुटबल कलाको विकास गरेका सेटिन ‘रेसिङ्ग स्यानट्यान्डर’का (स्पेनिश फुटबल क्लब) लिजेन्ड हुन्, जहाँ उनी ‘एल मास्ट्रो’ उपनामले चिनिन्छन् ।
गृहनगरको क्लब रेसिङ्गबाट १२ सिजन फुटबल खेलेका उनले आफ्नो खेलाडी करियरको सुरुआत र अन्त्य त्यहीँ क्लबबाट गरेका थिए । लेभान्टे क्लबका लागि छोटो अवधिको प्रशिक्षकको भूमिका सम्हालेका सेटिन त्यसअघि एथ्लेटिको मड्रिड र लोगरोन्स क्लबबाट जादूमयी प्रशिक्षण गर्नमा व्यस्त थिए ।
अचम्मको कुरा, सेटिनले आफ्नो प्रशिक्षण करिअरको प्रारम्भ उनकै प्यारो क्लब रेसिङ्गबाट सन् २००१ बाट सुरु गरे । इक्वेटोरियल राज्य गिनीका लागि तीन महिना प्रशिक्षण सम्हालेका सेटिन कुनैबेला पोली इजिडो र लोगरोन्स क्लबको प्रशिक्षकसमेत रहेका थिए ।
पाँच वर्षसम्म लुगो क्लबलाई प्रशिक्षण दिएका सेटिनको लुगोलाई सेगन्डा डिभिजन ‘बी’मा बढुवा गराउन मुख्य भूमिका रहेको थियो । त्यस कार्यकाल उनको प्रशिक्षण करिअरकै सर्वाेत्कृष्ट थियो ।
स्पेनिश लिगमा पाल्मास रेलिगेशन जोनमा थियो । अक्टोबर २०१५ मा लास पाल्मासको प्रशिक्षण सम्हालेका सेटिनले सिजनको अन्त्यमा पाल्मासलाई लिगको ११औं स्थानमा पुर्‍याउन सफल भएका थिए । लास पाल्मास प्रशिक्षणलाई २०१७ सिजनको समाप्तीसँगै अन्त्य गरेका सेटिइन त्यतिबेलासम्म आकर्षक ‘पोसेसिभ’ फुटबलको लागि फुटबल जगतमा प्रख्यात भइसकेका थिए ।
लास पाल्मासबाट बिदा भएसँगै रियल बेटिसले २०१७मा सेटिनलाई प्रशिक्षकको रूपमा क्लबमा नियुक्त गर्‍यो । सेटिननले प्रशिक्षणको पदभार सम्हालेकै सिजन रियल बेटिस ला लिगामा छैटौं स्थानमा रहँदै युरोपा लिगमा छनोट हुन सफल भयो । ‘द ग्रेट डर्बीमा’ आफ्नो घरेलु प्रतिद्वन्द्वी सेभिल्लाविरुद्ध ५–३ को रोमाञ्चकारी जितले प्रशंसकहरूको बीचमा यीनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढायो ।
त्यसपछि भने सेटिनको टोली यस्तै रोमाञ्चक परिणामहरूको पर्यायवाची नै बन्यो । २०१८ नोभेम्बरमा बार्सिलोनालाई उसको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा ४–३ को नमिठो हार चखाएपछि भने उनको चर्चा झनै शिखरमा पुग्यो । २०१८–१९ को सिजनमा निराशाजनक १०औं स्थानमा लिग सकाएपछि भने सेटिननले बेटिससँगको प्रशिक्षण सम्झौतालाई एक वर्षअघि नै अन्त्य गरे ।
च्याम्पियन्स लिगमा क्लबले आफ्नो स्थान बनाउन नसक्नु र लिगमा सोचेअनुसारको नतिजा ल्याउन नसक्नु नै सेटिनको रियल बेटिसबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण बन्यो । क्लबबाट बाहिरिए पनि सेटिनलाई उनका प्रशंसकहरूले ‘पोसेसिभ’ फुटबल शैलीका लागि सदैव याद गरिरहेका थिए ।
चेस खेलका कुशल खेलाडीसमेत रहेका सेटिनले विश्व चेस च्याम्पियन अनातोली कर्पोभ र ग्यारी कास्परोभको विरुद्ध चेस खेलिसकेका छन् । सेटिन चेस खेलका केही सिद्धान्तहरुलाई फुटबलमा पनि लागू गर्न सकिने विश्वास गर्छन् । सामान्यतः आक्रामक ४–२–३–१ फर्मेशनमा फुटबल खेल्न रुचाउने सेटिइनको पहिलो प्राथमिकताचाहिँ ‘बल पोसेसन’ नै हो ।
‘‘कहिलेकाँही तपाई कुनै खेलाडीले अचानक उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको देख्नुहुन्छ र छक्क पर्दै यो कसरी सम्भव भयो भनेर सोच्नुहुन्छ,” सेटिइन भन्छन्, “उसले राम्रो खेल्न थाल्छ किनकी तपाईं उसले सबैभन्दा मन पराउने चिजः फुटबल दिनुहुन्छ ।”
बार्सिलोनाका रक्षात्मक मिडफिल्डर सर्जियो बुस्केट्स पनि क्लबका नयाँ प्रशिक्षकसँग सहकार्य गर्न आतुर हुने छन् । सर्जियो आफैँले “प्रेम र प्रशंसाको साथ क्विक तपाईंको लागि, तपाईंको फुटबलप्रतिको दृष्टिकोण साँच्चै नै सराहनीय छ । आगामी दिनका लागि हार्दिक शुभकामना ।” लेखिएको हस्ताक्षरसहितको रातो टि–सर्ट सेटिनलाई उपहार दिएका थिए ।
बार्सिलोना क्लब इतिहासका सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति योहान क्रुफको फुटबल दर्शनका प्रशंसक सेटिन कु्रफको फुटबल दर्शनप्रतिको प्रेम देखाउन कत्ति पनि हिच्कीचाउँदैनन् ।
“मलाई याद छ जब योहान क्रुफ बार्सिलोनाको साथ आए,” २०१९मा ‘द कोच भ्वाईस’सँगै बोल्दै सेटिन भन्छन्, “तपाईंले उनीविरुद्ध खेल्नुभयो, र पूरै खेल बलको पछाडि दौडनुभयो । मैले आफैँलाई भनें, ‘यो मलाई मनपर्‍यो म स्वयंम् यो टोलीमा हुन चाहन्छु, र जात्र चाहन्छु कि आखिर कसरी किन यो हुँदैछ ?”
“खेल अवधीभर कसरी बललाई स्थायी रूपमा आफ्नो टिमका खेलाडीबीच राख्न सकिन्छ ताकी खेलभरि तपाईंको विपक्षी तपाईंको पछाडिमात्रै कुदीरहन सकुन्,” उनले भने, “त्यसबेलादेखि मैले मेरो जीवनको अनुभव गर्न थालेँ, मेरो फुटबल करिअरको अनुभव गर्न थालेँ ।”
“मैले साँच्चिकै फुटबल हेर्न सुरु गरें । फुटबलको विश्लेषण गर्न थालेँ । म बुझ्न चाहन्थेँ कि भविष्यमा प्रशिक्षक भएपछि मैले मेरो व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ, म अहिले कस्तो हुनुपर्छ,” उनले थपे ।
भाग्यको मोडमा, सेटिन आफैं अहिले त्यो क्लबको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन् जहाँबाट उसको खेल शैलीको विकास भएको थियो । पोसेसिभ खेलकै लागि विश्वचर्चित क्लब बार्सिलोनाका प्रशिक्षकको पदभार सम्हाल्न आएका पोसेसिभ फुटबल शैलीका प्रशंसक सेटिन र बार्सिलोनाबीच तालमेल कत्तिको मिल्ने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।